जानी राखौं क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला के खाने, के नखाने ? – Sandesh Munch
May 18, 2020 319
काठमाडौं । क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला अन्य समयभन्दा बढि आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत हुन आवश्यक छ । यस बेलामा सन्तुलित खालको खानेकुरा खाने गर्नुपर्दछ। यस्तो बेलामा प्याकेटमा बन्द, डिब्बा बन्द खानेकुरा, नून तथा चीनीको सेवन कम मात्रामा गर्नुपर्छ । घरमा बनेका स्वस्थ र पौष्टिक भोजन खानुपर्छ । यसका साथै चिया अथवा कफिको सेवन धेरै गर्नु हुँदैन ।
के खाँदा राम्रो ?
आफ्नो पौष्टिक आहारमा धेरैभन्दा धेरै फाइबरयुक्त खानेकुराहरु जस्तै तरकारी, फलफुल, दाल, गेडागुडि, ओट्स, ब्राउन पास्ता, ब्राउन राइस आदि खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ । यसले पाचन क्रिया राम्रो हुन्छ भने एसिडिटी, कब्जियत र अन्य समस्याहरुको सामना गर्नु पर्दैन ।
मदिरा सेबन गर्नु हुदैन, मदिरा पिउदा कोरोनाको खतरा झन् बढ्छ ।
चुरोट झन खानै हुदैन। कोरोनाको सबैभन्दा बढी खतरा चुरोट खानेहरुलाइ नै छ।
आफ्नो पौष्टिक आहारमा त्यस्ता खानाहरु अत्याधिक सेवन गर्नु पर्छ, जसमा भिटामिन सी र डी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ ।
यसले तपाईंको रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउँछ ।
खानापछि सख्खर र सुप सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसले खाना पचाउन सजिलो हुन्छ ।
कुन–कुन कुराहरुबाट बच्नु पर्छ ?
चीनीको सेवन पनि कम गर्नुपर्छ । तपाईँले दिनभरीमा ३ चम्चासम्म चीनीको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंलाई गुलियो खान मन लाग्यो भने गुलिया फलफुल, डेजर्ट अथवा सख्खरको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
चिल्लो खानेकुरा धेरै नखाने
यी जानकारीहरु हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशिकामा आधारित छन। तपाइले पनि यो जानकारिलाई धेरैभन्दा धेरैलाई जानकारी गराइदिनुहोला।
Prevके स्वास लिँदा र बोल्दा पनि हुन्छ कोरोना संक्रमण ? वैज्ञानिकले गरे फेरी यस्तो दावी पढ्नुहोस
Nextतपाईलाई ग्यास्ट्रिकले हैरान हुनु हुन्छ? यी खाना खानुहोस ५ दिनमा चट्ट हुनेछ उपाय सहित
खुशीको खबर! फेरि आज २१ जना कोरोना निको भएर गण्डक अस्पतालबाट डिस्चार्ज
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83248)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12025)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11315)